बिहान उठ्ने बित्तिकै कमजोरी महसुस हुन्छ ? यी टिप्स अपनाउनुहोस्, समस्या हट्नेछ – Dcnepal
बिहान उठ्ने बित्तिकै कमजोरी महसुस हुन्छ ? यी टिप्स अपनाउनुहोस्, समस्या हट्नेछ
प्रकाशित : २०७९ वैशाख २९ गते १०:५६
काठमाडौं । कहिले काहीँ बिहान उठ्दा शरीरमा थकान र कमजोरी भएको महसुस हुन्छ । जिउ एकदम भारी महसुुस भएका कारण दिनभरी नै काम गर्न मन नलाग्ने हुन्छ । यस्तो तपाईलाई पनि भएको भए आज आज हामी तपाईलाई यो समस्या समाधान गर्ने सही उपाय बताउछौँ ।
बिहान उठ्ने र राती सुत्ने समय निर्धारण गर्ने – सबैभन्दा पहिले आफ्नो सुत्ने र उठ्ने समय तय गर्नुहोस्। निर्धारित समयमा सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्, किन भने तपाईं पर्याप्त मात्रामा निदाउन सक्नुहुने छ । अधुरो वा अधुरो निद्राले तपाईको बिहानको दिनचर्यालाई असर गर्छ। त्यसैले राती ७–८ घण्टा राम्रो सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले निद्राको चक्र र मस्तिष्कको कार्यलाई सुधार गर्नेछ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै आधा लिटर मनतातो पानी पिउने – बिहान उठ्ने बित्तिकै एक लिटर मनतातो पानी पिउने बानी बसाल्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईको शरीर हाइड्रेटेड रहन्छ र पाचन प्रणालीले पनि राम्रोसँग काम गर्नेछ। विहानको समयमा जगिङमा जानुहोस् वा लगभग २०–३० मिनेटको लागि हिंड्नुहोस्। यसले रक्तसञ्चार बढाउँछ र अनुहार र शरीरलाई ताजा राख्छ।
बिहानको खाजामा प्रोटिनयुक्त खाना खाने– बिहान जगिङपछि नुहाएर बिहानको खाजा खानुहोस्। बिहानको खाजामा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानु राम्रो हुन्छ । यी खानाले दिनभर ऊर्जावान महसुस हुन्छ । यसका साथसाथै तपाईको मुड पनि उत्साहपूर्ण रहन्छ।
कमजोरी हटाउन खानै पर्ने कुराहरु:
शुद्ध घ्यु –घ्युले शरीरलाई प्रशस्त मात्रामा ऊर्जा दिनुका साथै शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास पनि गर्दछ। जसले गर्दा शरीर कमजोर महसुस हुनु, थकानको महसुस हुनु, आलस्यपन महसुस हुने समस्या निर्मुल हुने गर्दछ। घ्युलाई दैनिकरुपमा खानामा मिलाएर समावेश गर्दा वा तातो दुधमा घ्यु मिलाएर पिउँदा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको सुधार हुनुका साथै अनुहारमा पनि चमक आउने गर्दछ।
केरा – केरामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन, एन्टिअक्सीडेन्ट, एन्टिब्यक्टेरियल गुणहरू पाइन्छ। यसलाई दैनिकरुपमा दुधमा मिलाइ बनाना शेक बनाएर पिउँदा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार हुने गर्दछ। जसले गर्दा शरीरमा हुने थकान तथा आलस्यपनालाई निर्मुल गर्न मद्दत गर्दछ।
किसमीस– किसमिसमा आइरन भरपूर मात्रामा पाइन्छ । जस्ले शरीरमा रगतको मात्रालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ। १२ घण्टासम्म पानीमा भिजाएर राखेको किसमिसको पानी सेवन गर्दा पेट सम्वन्धी रोगहरुको निवारण हुनुका साथै पाचन प्रणालीको पनि सुधार हुने गर्दछ।
तुलसी –तुलसीका पातहरुमा थुप्रै प्रकारका औषधि गुणहरू पाइन्छन्। तुलसीका पातहरुलाई कालो चियामा मिलाई पिउँदा थकान, टाउको दुख्ने समस्या र मौसमी ज्वरोको लागि फाइदाजन हुन्छ। साथै, यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि बढाउँदै अन्य रोगहरुबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
अनार – एन्टिअक्सीडेन्ट, एन्टिवायरल र एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरु भरपुर मात्रामा पाइन्छ। अनारले शरीरको रगतको मात्रालाई पनि बढाउँदछ। शरीरमा थकान महसुस हुनु, कमजोरी महसुसको मुख्य कारण भनेको शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रगत नहुनु हो। दैनिकरुपमा एउटा अनार सेवन गर्दा शरीरले उचित मात्रामा पोषण पाउने गर्दछ। साथै यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि सदृढ गर्दछ।